Nhau - ndezvipi zvinhu zviri mupaneru wezuva
Chekutanga pane zvese, ngatitarisei pazvidimbu zvemadhigiramu ezuva.
Iyo yepakati yakatetepa ndiwo maseru ezuva, ndiwo akakosha uye akakosha chikamu cheplaneru yezuva. Kune mhando dzakawanda dzemaseru ezuva, kana tikakurukura kubva pakuona kwehukuru, iwe unowana matatu makuru maseru ezuva mumusika wazvino: 156.75mm, 158.75mm, uye 166mm. Ukuru hwesero rezuva uye nhamba inozivisa saizi yepaneru, yakakura uye zvakanyanya sero, iro rakakura iro panhivi richava. Iwo maseru akatetepa uye anotsemuka zviri nyore, ndicho chimwe chezvikonzero nei tichiunganidza maseru kune mapaneru, chimwe chikonzero ndechekuti sero rega rega rinogona chete kuburitsa hafu volt, iri kure chaizvo kubva pane izvo zvatinoda kushandisa mudziyo, saka kuitira kuti tiwane magetsi akawanda, tinowaya maseru akateedzana tobva tasunganidza tambo dzese dzakateedzana kuva mupaneru. Kune rimwe divi, kune mhando mbiri dzesilic rezuva maseru: monocrystallian uye polycrystallian. Kazhinji, huwandu hwenhanho yeiyo poly cell inoenda kubva ku18% kusvika 20%; uye mono cell masero kubva pa20% kusvika pa22%, saka unogona kutaurira mono maseru kuunza hunyanzvi hwakanyanya kupfuura masero epoly, uye zvakafanana nemapaneru. Izvo zvakare zviri pachena kuti iwe uchabhadhara yakawanda kuti ive yepamusoro kushanda izvo zvinoreva kuti mono solar panel inodhura pane poly solar solar panel.
Chikamu chechipiri iEVA firimu iyo yakapfava, yakajeka uye ine kunamira kwakanaka. Inodzivirira maseru ezuva uye inowedzera maseru 'mvura uye ngura kuramba kugona. Anokodzera EVA firimu yakasimba uye yakakwana kune laminating.
Chimwe chinhu chakakosha igirazi. Enzanisa negirazi yenguva dzose, girazi rezuva ndizvo zvatakadana Ultra yakajeka uye yakaderera simbi yakanyorova girazi. Inotaridzika kunge chena diki, yakaputirwa pamusoro kuti iwedzere kutapurirana mwero iri pamusoro pe91%. Iyo yakaderera simbi yakanyorovera chimiro inowedzera simba uye nekudaro inowedzera echimakanika uye yekudzivirira kugona kwemasolar panels. Kazhinji ukobvu hwegirazi rezuva ndere 3.2mm uye 4mm. Mazhinji maseru akaenzana maseru 60 maseru uye maseru makumi manomwe nemaviri isu 3.2mm girazi, uye akakura mapaneru senge 96 maseru anoshandisa 4mm girazi
Mhando dze backsheet dzinogona kuve dzakawanda, TPT inoshandiswa nevazhinji vagadziri veesilicon solar panels. Kazhinji TPT chena kuwedzera mwero wekuratidzira uye kudzikisira tembiricha zvishoma, asi mazuva ano, vatengi vazhinji vanofarira dema kana mavara kuitira kuti vawane chimiro chakasiyana.
Iro izita rizere re furemu ndeye anodized aluminium alloy furemu, chikonzero chikuru nei tichiwedzera furemu ndeyekuwedzera kugona kwemuchina wepaneru rezuva, saka zvinobatsira kumisikidzwa uye kutakura. Mushure mekuwedzera furemu uye girazi, iyo solar panel inova yakaoma uye yakasimba kwenguva inosvika makore makumi maviri nemashanu.
Chekupedzisira asi chisiri chidiki, junction bhokisi. Dzinomira zuva mapaneru ese ane junction bhokisi anosanganisira bhokisi, tambo uye zvinobatanidza. Ipo madiki ezuva kana akagadziriswa ezuva anogona kusasanganisira ese. Vamwe vanhu vanosarudza clip pane zvinobatanidza, uye vamwe vanosarudza yakareba kana ipfupi tambo. Junction junction bhokisi rinofanirwa kuve nekupfuura diode kudzivirira inopisa nzvimbo uye pfupi pfupi. Iyo IP padanho inoratidza pane iro bhokisi, semuenzaniso, IP68, inoratidza kuti ine yakasimba mvura yekumusoro kugona uye inobvumira iyo kutambura nekusingaperi kunaya.